खुमलटारका ‘विश्वासपात्र’ गौतम यसरी भए बालुवाटार युटर्न ! | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
access_time२०७७ साल श्रावण १५ गते, बिहीबार ०२:५९ PM chat_bubble_outline Comments folder_open राजनीति
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतम पछिल्ला केही महिनादेखि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ छाडेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' निकट पुगेका थिए । दुई दिनअघि एकाएक पार्टी विग्रह रोक्न भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि फेरि उनी खुमलटारबाट बालुवाटार नजिक पुगे ।
उपाध्यक्ष गौतमले ६ बुँदे सार्वजनिक गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले राहत महसुस गरे । उनले त्यहीँ दिन नै उपाध्यक्ष गौतमको निवास भैँसेपाटीमा डिनर मिटिङ गरे । तर, ६ बुँदे सार्वजनिक गरेर बालुवाटारमा आयोजित बैठकमा सहभागी भएका गौतमले पार्टीमा संकट निम्तिनुको मुख्य कारक ओली भएको बताएका थिए ।
बैठकमा बोल्दै उनले भनेका थिए, 'छोड्नुस् भन्दा पनि उहाँ तयार हुनुभएन । केपीबाट सरकार पनि चल्दैन, पार्टी पनि चल्दैन भनेर एक वर्षअघि मैले भन्दा माधव कुमार नेपालले अहिले हटाउने कुरा नगरौं । आलोचना गरौं, सुध्रिन समय दिउँ भन्नुभयो । अहिले पार्टीमा यत्रो विरोध र आलोचना भएपछि उहाँ आफैंले छोड्नुपर्ने हो । उहाँमा आलोचना सुन्ने साहस छैन । उहाँ कम्युनिस्ट हुन योग्य मानिस नै होइन । यस्तो व्यक्ति बोकेका छौं, जसले हाम्रो काँधमा फोहोर मात्र गरेको छ ।'
गौतमले ओलीलाई तत्काल हटाउँदा दुर्घटना हुने डर भएकाले आफूले पार्टी फुटबाट जोगाउनका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याएको बताएका थिए । पार्टी फुटबाट बचाउनका लागि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नहुने तर्क उनले गरेका थिए ।
किन आयो ६ बुँदे प्रस्ताव ?
बेलाबेलामा बालुवाटार-खुमलटार गरेपछि उनी निकट नेताहरुले गौतमको आलोचना गरेका छन् । बुधबार र बिहीबार दिनभर गौतमले दर्जनौँ नेताहरुसँग संवाद गरेका छन् । धेरै नेतालाई उनले पार्टी एकताका लागि आफूले ल्याएको प्रस्तावले नै निकास निस्किने बताएका छन् ।
तर, उनका एकजना विश्वासपात्रले भने बालुवाटारले महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत फेरि अर्को आश्वासन दिएकाले गौतमको युटर्न भएको बताएका छन् । उनले भने, 'उहाँलाई फेरि आश्वासन दिइएको कुरा बुझिँयो । महासचिवज्यूसँग उहाँको ०५४ भन्दा अघिदेखि नै राम्रो सम्बन्ध छ । उहाँले नै यस्तो गर्न लगाउनु भएको रहेछ । उहाँको भन्दा पनि महासचिव ज्यूको सुत्र हो त्यो ।'
गौतमले एकताको महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष पद पाउने आश्वासन पाएकाले ६ बुँदे सार्वजनिक गरेको उनले दावी गरे । उनले भने, 'उहाँलाई पहिलेदेखि नै दिँइदै आएको आस्वासन दिएको मेरो जानकारीमा आयो । त्यो झुटो हो भन्ने उहाँले बुझ्नु भएन । एकता महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष र एकदुई वर्षमा कहीँबाट चुनाव जिताएर चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने पुरानै प्रस्ताव पो आएको रहेछ ।'
पटक पटक विभिन्न आस्वासन पाउने तर पूरा नहुने समस्यामा गौतम परेको भन्दै ती नेताले भने, 'उहाँसँग मेरो तीन दशकभन्दा धेरैको सहकार्य छ । अहिलेसम्म उहाँमा षडयन्त्र गर्ने बानी छैन । त्यसैले उहाँले अरुले गरेको षडयन्त्र पनि बुझ्नु हुन्न । अब एकदुई महिनामा फेरि फर्किनु हुन्छ जस्तो लाग्छ । अहिलेलाई भने उहाँ अडिग नै हुनुहुन्छ ।'
गौतम निकट अर्का नेता बलराम बाँस्कोटाले पार्टी एकताको भावना अनुसार नै ६ बुँदे आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'प्रधानमन्त्रीले घाँस हाल्ने कुरा नयाँ भएन । तर, उहाँले सार्वजनिक गर्नु भएको ६ बुँदे प्रस्ताव घाँस देखेर होइन । उहाँ घास खाने व्यक्ति नै होइन । उहाँले घाँस खाने भए पो यस्तो भन्न ठिक हुन्थ्यो होला । उहाँलाई व्यक्तिको भन्दा पार्टीको चिन्ता छ । प्रधानमन्त्री ज्यूले व्यक्तिगत तरिकाले पार्टी चलाउन खोज्नु भयो । अर्को पक्षले बहुमत भन्दा पार्टी फुटतर्फ जाने भएकाले उहाँले यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको हो ।'
बाँस्कोटाले पटक पटक धोका दिए पनि पार्टी एकताका लागि इमान्दार भएर गौतम क्रियाशील भएको तर्क गरेका छन् । उनले भने, 'मैले पनि उहाँसँग दशकौँदेखिको संगत गरेको छुँ । उहाँलाई लागेको कुरा इमान्दारीतापूर्वक राख्नु हुन्छ । अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने क्षमता उहाँमा छ । सोझो पनको फाइदा उठाउन खोज्नु सामान्य कुरा भइहाल्यो । तर उहाँले जे गर्नू भएको छ, त्यो पार्टी एकताका लागि गर्नू भएको हो । यसमा अन्य कारण नखौजौँ जस्तो लाग्छ ।'